လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျး(ဘိုကလေး(ကြေးရှာ) – Than Lwin
သံလှငျနိုငျငံသားစှမျးရညျမွှငျ့အဖှဲ့ကစီစဉျသညျ့ ကောငျးမှနျသောဒသေန်တရစီမံအုပျခြုပျမှုတှငျ နိုငျငံသားမြားပူးပေါငျးပါဝငျမှုအခနျးကဏ်ဍမွှငျ့တငျရေးစီိမံခကျြ(ဖြာပုံခရိုငျ/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖွဈ (ဘိုကလေးမွို့နယျ၊ ပိုကျစလပျကြေးရှာ၏ ဝကျကျော၊ ၀ါးနကျကုနျး၊ ပိုကျစလပျ ကြေးရှာအုပျစုမြား။ စကျဆနျးကြေးရှာ၏ အမှတျ ၁ နယျမွေ၊ အောငျခမျြးသာ၊ ပုဏ်ဏရိပျ ကြေးရှာအုပျစုးမြား။ ဂရနျးကြေးရှာ၏ ရှာမ၊ ရှာသဈ၊ သာယာကုနျးကြေးရှာအုပျစုမြား)အတှငျး လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျးအစီအစဉျကို ( ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉ မှ ၂. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ခွောကျရကျတာဆောငျရှကျခဲ့သညျ။
၎င်းငျး စဈတမျးကို ဖြာပုံခရိုငျအတှငျးရှိမွို့နယျမြားဖွဈသော ကြိုကျလတျ၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှငျ့ဖြာပုံမွို့နယျမြားနှငျ့ ကြေးရှာမြားတှငျ ကောကျယူသှားမညျဖွဈပွီး၊ ကြိုကျလတျ၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖြာပုံနှငျ့ ဘိုကလေးမွို့နယျ တို့တှငျကောကျယူပွီးစီးခဲ့သညျ။
ယခုစဈတမျးကိုကောကျယူရာတှငျ အလငျးတနျးလူမှုဖှံဖွိုးရေးအဖှဲ့ဝငျမြားကတကျကွှစှာပူးပေါငျးပါဝငျကူညီပေးခဲ့ကွပါသညျ။ စဈတမျးကောကျယူရာတှငျ ကူညီပေးခဲ့ကွသော ဒသေခံပွညျသူမြား၊ အလငျးတနျးလူမှုဖှံဖွိုးရေးအဖှဲ့နှငျ့ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျခဲ့ကွသူမြားအား အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ပိုက်စလပ်ကျေးရွာ၏ ၀က်ကော်၊ ၀ါးနက်ကုန်း၊ ပိုက်စလပ် ကျေးရွာအုပ်စုများ။ စက်ဆန်းကျေးရွာ၏ အမှတ် ၁ နယ်မြေ၊ အောင်ချမ်းသာ၊ ပုဏ္ဏရိပ် ကျေးရွာအုပ်စုးများ။ ဂရန်းကျေးရွာ၏ ရွာမ၊ ရွာသစ်၊ သာယာကုန်းကျေးရွာအုပ်စုများ)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၉ မှ ၂. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ခြောက်ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များနှင့် ကျေးရွာများတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံနှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ် တို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။
ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် အလင်းတန်းလူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များကတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ အလင်းတန်းလူမှုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Previous Post: သံလှငျ၏ အစီရငျခံစာ(၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ )
Next Post: လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျး(ကြိုကျလတျမွို့နယျ(ကြေးရှာ)